Dị njirimara nke amine oxide surfactants
1. Mmiri mmiri
Ebe ọ bụ na e nwere ihe jikọrọ ọnụ bụ N-0 na amine oxide molecule, na oge dipole bụ 4.38D, onyinye ahụ nwere njirimara nke oke polarity na ebe agbaze dị elu. Ọ dị mfe soluble na polar solvents dị ka mmiri na ala alcohols, ma o siri ike soluble N'ihi na-abụghị polar solvents dị ka ịnweta mmanụ na benzene.
Na ngwọta mmiri, amine oxide dị n'ọtụtụ dị n'ụdị hydrate (R1R2R3NO · XH2O), mana site na ngbanwe nke uru pH, polarity ga-agbanwe. Dịka ọmụmaatụ, na ngwugwu alkaline na pH> 7, ọ bụ tumadi anionic. . Otú ọ dị, na ngwọta acidic na pH <3, amine oxides dịkarị n'ụdị cations [R1R2R3NOH] +. Mmiri mmiri nke amine oxide nwere ihe na-adịghị ike oxidizing, a na-eji ya na ihe ịchọ mma iji mee ka anụ ahụ dị ọcha.
2. Ihe omume n’elu
(1) Mgbapu ihu: Mgbe ị gbakwunye amine oxide, ihu igwe nke mmiri ga-ebelata nke ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, mgbatị dị n'elu mmiri dị ọcha bụ 72.80 × 10-3N / m. Esemokwu dị elu na igwe micelle dị egwu (cmc) nke amine oxides dị iche iche bụ ihe dịka 30 × 10-3N / m. Na cmc, esemokwu amine oxide dị ala karịa nke nnu ammonium quaternary, yabụ ọrụ amine oxide dị mma karịa nnu quarternary ammonium.
(2) Nkọwa: Mgbe amine oxide gwakọtara na AES ma ọ bụ AS, ọ na-enwe mmetụta mmekọrịta na nsị, mana mgbe agwakọtara ya na LAS, mmetụta mmekọrịta ya abụghị nnukwu. Ngwaahịa nke ịsa lipstick na-eji 12% ọdụdụ acid (C12: C18 = 12: 1), 13% na-abụghị ionic surfactant, 12% LAS. Ọ bụrụ na agbakwunye ụfọdụ amine oxide, mmetụta nhicha ga-adị mma nke ukwuu.
(3) Emulsifying ike: Emulsifying ike bụ egosi iji tụọ ogo emulsifiers. Dịka ọmụmaatụ, emulsify the amine oxide aqueous solution na mmanụ ala ihe mgbaze n'okpuru otu ọnọdụ na 70 Celsius C, wee hụ mgbanwe olu mgbe emulsification. Nsonaazụ na-egosi na na amine oxide homologs, ikike emulsification na-abawanye na mmụba nke ọnụọgụ carbon nke otu ogologo alkyl ogologo. Akụkụ ọzọ nke amine oxide dị ka emulsifier bụ na ọ nwere ike emulsify n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke pH ụkpụrụ, karịsịa na mgbasa ozi acidic, ọ nwere ike dakọtara na quaternary ammonium cations dị ka ihe nchekwa na bactericides, ọ bụghị naanị na ọ ga-egbochi arụmọrụ nke mmebi ahụ ihe nchekwa ahụ, ma nwee ike ịkwalite arụmọrụ ya na-egbochi mmebi ahụ, nke karịrị iru ndị ọzọ na-abụghị ionic surfactants.
(4) amfụfụ na ịfụfụ ụfụfụ: Amine oxide bụ ezigbo ụfụfụ na-eme ka ụfụfụ na-arụ ọrụ, nke a na-ejikarị eme mmiri na-asa ákwà ma ọ bụ na-asacha efere. Ngwaahịa nwere usoro onunu ogwu 1% na 5% nwere arụmọrụ dị nro, enweghị mgbakasị n'anya, na iguzogide mmiri siri ike. Ọ nwere ezigbo arụmọrụ, na ụfụfụ dị elu na mmiri siri ike na pH = 9, 300mg / kg. Mgbe a na-agwakọta mmanya na-egbu egbu sodium sulfate (AS) na amine oxide, ụfụfụ ahụ jupụtara ma kwụsie ike, ọbụlagodi na abụba, ọ gaghị agbanwe. Ya mere, a na-ejikarị ya na ndị ọrụ anionic nọ n'ọrụ dịka LAS, AS, AES, SAS, wdg, ma nwee ezigbo mgbochi iwe. Fụfụ nke amine oxide mepụtara nwere mmetụta dị mma ma jiri ya na shampoos na ngwaahịa ịsa ahụ.
Mgbe amine oxide na-adịkarị karịa karịa ụfọdụ, a na-etolite oke etiti etiti. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye, enweghị ike ịgbanwe ya na mpaghara ekwentị isotropic. Ya mere, mgbe amine oxide mepụtara, n'ozuzu naanị ihe dị 30% mmiri ọgwụ nwere ike nweta, nke siri ike inweta Maka ngwaahịa nwere nnukwu uche, a ga-agbakwunye ihe ndị na-eme anionic iji nweta mgbatị dị elu nke ngwaahịa ammonium oxide.
（4 Ndakọrịta na anionic surfactants
Amine oxide amphoteric surfactants adịghị arụ ọrụ nke ọma. Anionic surfactants na amine oxides na-eji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe eji eme ihe iji belata iwe nke ndị na-eme anionic ma nweta mmetụta pụrụ iche. Mgbe ịta nke amine oxide dị ala karịa cmc, agwakọta na anionic surfactants na-etolite anions na cations ga-amụba onye Onyenwe anyị + nke ọdịda, nke a na-akpata protonation ọchịchọ nke amine oxide; na cmc, ụdị abụọ ahụ a gwakọtara micel; elu At cmc, a guzobere anion na cation salts na-edozi na micelles agwakọtara.
Mgbe pH≥8, amine oxide na-egosi njirimara ndị na-abụghị ionic ma nwee ike jikọta ya na anions; mgbe pH≤8, ndakọrịta na anions ga-emepụta ihe immiscible ebe, n'ihi na ọdịda; mgbe pH≤6, ha abụọ jikọtara ọnụ na nhazi kwesịrị ekwesị. Amine oxide na anionic surfactant jikọtara mepụta ụzọ anion-cation iji mepụta azịza uzo. N'oge a, a na-edozi nnu anion-cation na oke micelles surfactant. Ọ bụrụ na ejiri dimethyl amine oxide mee ihe karịa dimethyl amine oxide, ndakọrịta ga-aka mma; ọ bụrụ na edochi ya na amine oxide nwere ngalaba polyoxyethylene ether, mmetụta ga-adị mma.
(5) Ọrịa na-egbu ahụ
Amine oxide bụ ihe na-adịghị egbu egbu ma ọ bụ nke na-adịghị egbu egbu. Azụmaahịa ngwaahịa azịza ya nwere mgbakasị ahụ mbụ na akpụkpọ nke rabbits, na anya na - ewe iwe. Na ntinye uche 2%, enweghi iwe; a na-enye ya nri ma tinye ya na alkyl dimethyl maka afọ abụọ. Amine oxide, enweghị carcinogenesis nke amine oxide kpatara. Nbibi nke amine oxide dị mma, 88% nwere ike iweda ya mgbe izu abụọ na 93% nọ na izu anọ. Amine oxide abughi ihe na-egbu egbu ma nwee oke iwe na akpụkpọ na anya. Dabere na akụkọ KLein: LD50 nke amine oxide bụ 2000mg / kg ～ 6000mg / kg, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ LD50 nke nnu okpokoro nke 4000mg / kg. Mgbe agwakọtara ya na ndị ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ, amine oxide nwere mgbochi iwe na enwere ike iji ya na mgbochi dandruff shampoos iji belata mgbakasị nke ZPT. Tụkwasị na nke ahụ, na shampoos acidic na ngwọta acidic, amine oxide nwere ike iso ndị carboxyl na-emekọrịta ihe na ntutu na akụkụ anụ ahụ. Ọ nwere ike ime ka ntutu dịkwuo mma, belata nsị, dị mfe mgbochi mmiri, ma melite adịghị ike nke anụ ahụ.
Alkyl amine oxide nwere ụfọdụ ọrụ antibacterial, mana ọ naghị erute nje bactericidal siri ike nke nnu ammonium quaternary. Otú ọ dị, usoro ngwaahịa ndị nwere amine oxide nwere ihe antiseptik nke ha, nke nwere ike igbochi uto nke ebu ma nọgide na-arụ ọrụ dị elu na ngwọta dị egwu. . Compoundfọdụ onyinye amine oxides na-egosipụtakwa ihe ndị nwere nje bactericidal dị elu, ma jiri ya na ncha dị ka deodorant bactericidal, ọbụnakwa iodine nwere nje na-eme ka ọnụọgụ na nkwụsi ike nke ayodiin dịkwuo elu, wee rụọ ọrụ na nsị na mmekọrịta. N'ime ha, mmetụta nke dodecyl dimethyl amine oxide na igbochi uto nke Staphylococcus aureus bụ nke yiri nke cationic surfactant kwekọrọ, ebe nsị sterilization nke amine oxides ndị ọzọ adịchaghị mma.
Amine oxide nwere akwa hygroscopicity na ọchịchọ ionization, ma nwee ike mepụta ihe nkiri na-aga n'ihu n'ihu eriri ma ọ bụ resin, yabụ na ọ nwere ezigbo njirimara antistatic. E jiri ya tụnyere ndị ọrụ antistatic ndị ọzọ, ihe kachasị mma ya bụ mgbanwe na iru mmiri gburugburu ebe obibi, Mmetụta antistatic nwere obere mgbanwe, ọ na-egosipụtakwa ezigbo arụmọrụ antistatic ọbụlagodi n'okpuru iru mmiri dị ala. Amine oxide nwekwara ụfọdụ nkwụsi ike na ezigbo mmanu, nwere ike dakọtara na ndị na-ete mmanụ, ndị emulsifiers na ndị ọzọ na-emegide antistatic, ọ dịkwa mfe iji.
Amine oxide ọ bụghị nanị na ọ ga-adị na hypochlorite ngwọta n'onwe ya, kamakwa na-enyere ndị ọzọ na-eme ihe ike aka ịkwado hypochlorite, ya mere eji ya eme ihe na sterilization na disinfection detergents.